'लोक स्टार'को मन्चमा कतै रेकर्ड नभएका लोक गीत |Tapaiko Khabar
आज : २०७६ कात्तिक ४ गते
पृथ्वीराज ढुंगेल प्रकाशित : असोज ४, २०७६ Big News, Flash News, बिशेष इभेन्ट, लाेकस्टार विशेष, समाचार
चाहाना मिडियाको आयोजनामा हाल सन्चालनमा रहेको आई.एम.ई. नेपाल लोक स्टारको शुक्रबारको एपिसोड लोक संगीत प्रेमीको लागि केहि पृथक बनेको छ ।
पछिल्लो समयमा बनेका सबै गीतहरु रेकर्ड भएर बजारमा विभिन्न माध्ययमा उपलब्ध हुन्छन् तर लोक स्टारको २६ औँ एपिसोडमा प्रस्तुत भएका गीतहरु कुनै पनि डिजिटल माध्ययमा उपलब्ध छैनन् । यदि छन भने पनि हाम्रै गाँउघरमा मेला तथा विभिन्न पर्वमा प्रस्तुत गरीएको बेलाको छन् ।
लोक गीत संगीतको संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकास र विश्वव्यापी प्राचारको लागि सर्वाधिक धनराशी सहित आयोजना भएको नेपाल लोक स्टारमा शुक्रबारे एपिसोडमा पूर्वी नेपाल देखी पश्चिम नेपाल सम्मका गीतहरु समावेश छन् ।
अझ यो एपिसोडलाई विशेष बनाउन लोक संगीत र लोक संस्कृतीलाई नै आफ्नो अध्ययनको विषय बनाएर विधावारिधि गरेका डा. लोचन रिजालको समेत उपस्थीती रहेको या थियो । नेपाल लोक स्टारका उत्कृष्ट ८ प्रतिस्पर्धीले नै बेजेड प्रस्तुती दिएका थिए । यो एपिसोड सँगै लोक स्टारमा अब उत्कृष्ट ७ प्रतिस्पर्धीहरु बाँकी रहेका छन् ।
नेपालको सुदुरपश्चिम क्षेत्र देखि पूर्व क्षेत्र सम्ममा भेगीय रुपमा रहेका फरक फरक लोक गीतहरु प्रश्तुत भएका थिए । नेपाल लोक स्टारकै लोक संस्कृतीको अनुसन्धानको लागि जिम्मा पाएका डा. रिजालले आफूले तयार गरेको विभिन्न सांस्कृतीका झाँकीहरु समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
हेरौँ नेपाल लोक स्टारको २६ औँ एपिसोडमा प्रस्तुत भएका गीतहरु
यस भन्दा अगाडीदेउवाको बोलीप्रति राष्ट्रपतिको व्यंग्य
यस पछिसत्यराज आचार्यको स्वरमा ‘नलाएको माया’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)